प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन भोलि : कोको हुन्छन् मतदाता ? | Chhatapost.com
Home Breaking News प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन भोलि : कोको हुन्छन् मतदाता ?
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन भोलि : कोको हुन्छन् मतदाता ?
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत भोलि शुक्रवार ३३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ।
विधान अनुसार प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिले प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनको सभापतित्व गर्नेछ। यस्तै गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर अधिवेशनबाट निर्वाचित अपाङ्गता भएका प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनेछन्। प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन हुनेछ।
यसै गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन १६ र १७ मङ्सिरमा हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। काँग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन २४, २५ र २६ मङ्सिरमा काठमाडौँमा हुँदै छ।
Previous articleपहिलाे ई–पासपाेर्ट सत्यमाेहन जाेशीलाई
Next articleभक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ प्रदेशकै उत्कृष्ठ संघबाट सम्मानित